नेपालमा विदेशी लगानीको उपयुक्त वातावरण : प्रधानमन्त्री ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भक्तपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्यसेवामा स्थानीयको पहुँच बढाउन वडैपिच्छे घरदैलो नर्सिङ सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
काठमाडौँ — ‘घरमा कोही बिरामी छन् कि ?’ कसैले एकाबिहानै ढोका ढकढक्याएर यस्तो सोध्दा अनौठो लाग्न सक्छ । तर भक्तपुर नगरवासीका लागि सामान्य भइसक्यो ।
गत असार २० को बिहान जगातीका हरिकृष्ण शिल्पकार माथिल्लो तलामा चिया खाँदै थिए। तल घण्टी बज्यो। कान्छी छोरी रिनाले झ्यालबाट नियालिन्। तल थिए– स्टाफ नर्स सरिता गोसाईं र स्वास्थ्य स्वयंसेविका रत्नमाया खायमली। उनीहरुले सोधे– ‘तपाईंको घरमा कोही बिरामी छन् कि?’ भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित घरदैलो नर्सिङ सेवामा खटिएका थिए उनीहरु।
रिना सुरुमा छक्क परिन्। कुरा बुझेपछि बुबा हरिकृष्ण, आमा रामलक्ष्मी, दाइहरू राकेश र राजेश तथा बहिनी सुप्रभाको उमेर, पेसा र शिक्षाबारे जानकारी गराइन्। यतिन्जेलमा हरिकृष्ण दम्पती पनि तल ओर्लिए। नर्स गोसाईंले पहिले रामलक्ष्मीलाई भर्‍याङको खुडकलो बसाइन्। अनि उनको रक्तचाप जाँचिन्। उपकरणले माथि १४० र तल ८० देखियो, जुन अलि उच्च हो। ‘तपाईंले नुन र चिल्लो कम खानुपर्छ,’ गोसाईंले सुझाइन्। त्यसपछि हरिकृष्णको रक्तचाप जाँचिन्। उनको सामान्य रहेछ।
अहिले नगरपालिकाका १० वटै वडामा घरदैलो नर्सिङ सेवा सञ्चालनमा छ। बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म घरघरै पुगेर नर्स र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले नगरवासीको स्वास्थ्य जाँच गर्छन्। टोलीले मधुमेह, स्त्रीरोग, बालरोग, दम र खोकीका बिरामीलाई पनि निगरानी गर्छ।
उपचार नगराई घरमै बसेकालाई नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य सेवाकेन्द्रमा पठाइन्छ। रक्तचाप र मधुमेहका बिरामीलाई नियमित औषधि खान र बढी नै च्यापेकालाई अस्पताल जान सुझाइन्छ। टोलीले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे पनि नगरबासीलाई जानकारी दिन्छ। सरकारले भक्तपुरसहित ४२ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ।
नर्स र स्वयंसेविकाले नगरका बिरामीको तथ्यांक पनि संकलन गरिरहेका हुन्छन्। गत जेठसम्म १ हजार ६ सय ६३ परिवारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ४ सय ३५ जनालाई उच्च रक्तचाप, १ सय ७७ लाई मधुमेह, ८० जनालाई दम, ८० जनालाई हाडजोर्नी समस्या, ४१ जनालाई ग्यास्ट्रिक, १३ जनालाई थाइराइड, ३१ जनालाई मुटुरोग र ९ जनालाई क्षयरोग पाइएको छ। त्यस्तै सुस्त मनस्थितिका ३, प्यारालाइसिस भएका ७, मिर्गौला रोगका ५, पत्थरी भएका ४, कोलेस्ट्रोलका १४, क्यान्सरका ७ बिरामी र अशक्त–अपाङ्गता भएका १ जना रहेको नगरपालिकाको अभिलेख छ। टोली वडाका सबै घरमा एक चरण पुगेपछि दोहोर्‍याउँछ।
वडैपिच्छे फरकफरक टोली छ। नर्सहरू दैनिक कम्तीमा २० घर पुग्छन्। संकलित तथ्यांक लिएर उनीहरू बिहान साढे ९ बजे नगरका तीनवटा जनस्वास्थ्य सेवाकेन्द्रमा हाजिर हुन्छन्। तथ्यांक अद्यावधिक गर्छन्।
जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा बिरामीको भीड लागिसकेको हुन्छ। च्यामासिंह, पाँचतल्ले मन्दिर भगवतीस्थान र ब्यासी गरी तीन ठाउँमा यस्ता केन्द्र छन्। च्यामासिंहमा ५० रुपैयाँको टिकट काटेर विशेषज्ञ चिकित्सासेवा पाइन्छ। दोहोर्‍याएर जाँदा ३० रुपैयाँ तिरे पुग्छ। त्यहाँ बालरोग, स्त्रीरोग, हाडजोर्नी, दाँत, नाक, कान र घाँटी, छालासम्बन्धी उपचार उपलब्ध रहेको केन्द्रप्रमुख डा. रत्नसुन्दर लासिवाले बताए।
च्यामासिंहमा छिमेकी सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाका बासिन्दा पनि उपचार गराउन आउँछन्। यहाँ दैनिक ३ सय हाराहारीमा बिरामीको उपचार हुन्छ। यो केन्द्रमा नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे पनि छन्। बिजुक्छे असार १९ गते बिहान ९ बजेतिर केन्द्रमा आइपुगे। आधा घण्टाजति कुरेपछि उनको पालो आयो। केन्द्रको १ सय १ नम्बर कोठामा गई घुँडाको फिजियोथेरापी गराए। घुँडाको हड्डी खिइएकाले उनी एक वर्षदेखि केन्द्र धाइरहेका छन्। ‘विशेषज्ञ सेवा नगरमै पाएपछि बाहिर किन जानुपर्‍यो?,’ उनले भने।
भक्तपुर नगरपालिका र आसपासका बासिन्दालक्षित यी स्वास्थ्य केन्द्रमा ९ जना विशेषज्ञ डाक्टर र १४ जना मेडिकल अधिकृत छन्। नर्स र अन्य कर्मचारी ६१ जना। ‘भक्तपुर नगरवासीको औसत आयु कम देखिएको र औषधोपचार सर्वसुलभ नभएकाले जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको हो,’ नगरप्रमुख सुनील प्रजापतिले भने।
रैथाने भाषामै परामर्श
नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको भक्तपुरका अधिकांश बासिन्दाले नेपालभाषा बोल्छन्। त्यसैले नगरपालिकाले बिरामीले खुलस्त समस्या राख्न सकून् भनेर सकेसम्म नेपालभाषा नै जान्ने चिकित्सक, नर्स र स्वयंसेविका खटाउने गरेको छ। औषधि खाने तरिका सिकाउन स्थानीय भाषा झन् बढी आवश्यक पर्ने भएकाले नेवारी नबुझ्ने चिकित्सकलाई सघाउन सहयोगीसमेत खटाइएको च्यामासिंह केन्द्रप्रमुख डा. लासिवाले बताए।
नगरका जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा ३ सय रुपैयाँमा एक्सरे र १ सय २५ मा ईसीजी गरिन्छ। जेठ ७ देखि २४ घण्टे आकस्मिक उपचार कक्ष पनि व्यवस्था गरिएको छ।
गत वर्ष साउनदेखि आयुर्वेदिक उपचार सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याएको नगरले एक वर्षमा ९ हजारभन्दा बढीलाई यो सेवा दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षसँगै मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, मस्तिष्कघात, क्यान्सरको उपचार लिनुपर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्न थालेको छ।
घरदैलोमा खटिने स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नगरले दैनिक एक सय रुपैयाँ भत्ता दिन्छ। यहाँ ९० जना स्वयंसेविका छन्। बहिरंग सेवामा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रति दिन १५ सय र मेडिकल अफिसरलाई आंसिक सेवाबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता दिने गरिएको नगरले जनाएको छ। ‘नगरवासीलाई प्रभावकारी स्वास्थ्यसेवा दिन यस वर्ष साढे ३ करोड रुपैयाँ छुटयाएका छौं,’ नगरप्रमुख प्रजापतिले भने।
नगरले यस वर्ष आफ्नै लगानीमा २५ शय्याको ख्वप अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि अनुमतिसमेत लिइसकेको छ। अस्पताल बनाउन १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रजापतिले बताए। ‘बहिरंग सेवाजस्तै विशेषज्ञ सेवासमेत सस्तोमा आफ्नै ठाउँमा दिन लागेका हौं,’ उनले भने।
नगरका विभिन्न ६ स्थानमा शिशु स्याहार केन्द्र चलाइएको छ। हरेक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र राख्ने नीति छ। केन्द्रमा बच्चा राख्न चाहनेले मासिक १ हजार तिर्नुपर्छ। १५ बच्चा बराबर एक आया व्यवस्था गरिएको छ।
भक्तपुर नगरले अन्य स्थानीय सरकारको जस्तो आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्दैन। पुरातात्त्विक सम्पदा घुम्न आउने पर्यटकबाटै वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्छ। भौगोलिक रूपमा विकट नभएकाले पनि नगरले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा चाहेजति खर्चन सक्छ। नगरपालिकामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक अन्यको प्रतिनिधित्व शून्य छ।
नेमकिपाले अरू पार्टीको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने समस्या रहेको विपक्षीहरूको आरोप छ। नेकपा र कांग्रेसका नेताहरू राम्रो काम भए पनि नेमकिपाकै आम्दानीबाट गरेजस्तो गरिएको बताउँछन्। कांग्रेसका स्थानीय नेता अली भुजू भन्छन्, ‘नगरवासीको करबाट भएको काममा एउटै पार्टीको मात्रै हालीमुहाली किन? अरूको विचार र अस्तित्व पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ।’
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ २०:२५